Muxuu ku saabsan yahay shirka caalamiga ah ee Soomaaliya uga qeyb gashay dalka Hungary? – Bandhiga
Muxuu ku saabsan yahay shirka caalamiga ah ee Soomaaliya uga qeyb gashay dalka Hungary?
Wasiirka Boostada,Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Eng. Cabdi Cashur Xasan ayaa shir caalami ah uga qeybgalaya dalka Hungury.
Shirka ayaa looga hadlayay arrimaha Tiknolojiyada Caalamka oo horumaro badan uu ka sameeyay Bini’aadanka.
Wasiir Cashuur waxa uu ka qeyb galay furitaanka Bandhigga iyo Shirweynaha Isgaarsiinta Caalamiga ah ee (ITU Telecom World), isaga iyo wafdigiisa.
Bandhiggan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo ay isugu yimaadaan qeybaha kala duwan ee Isgaarsiinta iyo dowladaha caalamka ayaa ka furmay Magaalada Budapest ee caasimadda Dalka Hungary,kaasi oo socon doono 9/ilaa 12 Bishan September 2019.
Xog-hayaha Guud ee Midowga Isgaarsiinta Adduunka (ITU) ayaa ka soo qeyb galay Munaasabadda Furitaanka shirweynahan Mudane Houlin Zhao iyo Ra’iisul Wasaaraha dalkaasi Hungary oo martigeliyay shirweynahaasi Caalamiga ah.